Daa’imman Itoophiyaa guddifachaa sobaan gara Ameerikaatti geessaa kan ture yakka hojjachuu amane - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Daa’imman Itoophiyaa guddifachaa sobaan gara Ameerikaatti geessaa kan ture yakka hojjachuu amane
Daa’imman Itoophiyaa guddifachaa sobaan gara Ameerikaatti geessaa kan ture yakka hojjachuu amane
Lammin Ameerikaa, Jaams Hardiing umrii 55 jiraataa Atlaantaa, bara 2008 fi 09 waahiloota isaa woliin ta’uudhaan hojii sobaan ijoollee Itoophiyaa gara Ameerikaatti geggessaa turuu isaa amane. kana kan amane yeroo mana murtii Karolaayinaa Kibbaatti dhihaatetti. Yakki hojjatame, akka Jaams Hardiingitti, woraqaa sobaa kan ijoollee guddiffachaan gara Ameerikaatti ittiin fidan ministera Dhimma Haajaa Biyalaa Ameerikaatti galchaa turuu isaniiti. Sababani isaan dhihessaa turan ijoollee Itoophiyaa lammiilee Ameerikaa daa’imman gudifachuu barbaadanin wolqunnamsiisuu ta’us, garuu ijoolleen guddifachaaf qophaayan ulagaalee hunda osoo hinguunne woraqaa sobaa qopheessuun akka guddifachaan geggeeffamuuf haala mijeessaa turan.
Jaams Hardiing angawoota Itoophiyaaf matta’aa laatuudhaan ture hayyama guddifachaa argataafi woraqaa sobaa heddu harkatti galfataa kan ture. Yeroo yakka kana irratti bobba’ee turetti, Jaams Hardiing, itti gaafatamaa sagantaa guddifachaa idiladdunyaa ‘International Adoptions Guide Inc’ ture.
Previous articlePaaris keessatti namoonni 12 ajjeefamanii, 11 madoo taasifaman
Next articlePlaaneetiin ‘lakkuu ardii’ Kepler-438b jedhamtu argamte